Marxuum Xaaji Cabdikarim Xuseen Yusuf oo si maamuus qaran leh loogu aasay deegaanka toon – Guban Media
Marxuum Xaaji Cabdikarim Xuseen Yusuf oo si maamuus qaran leh loogu aasay deegaanka toon
May 12, 2019 May 12, 2019 Ali Mohamed 81 Views 0 Comments
Hargeysa–Alle haw naxariiste waxa shalay barqadii deegaanka Toon ee duleedka Hargeysa si maamuus qaran leh loogu aasay ruug-cadaagii nabadda iyo dib u heshiisiinta Marxuum Xaaji Cabdikariim Xuseen Yuusuf .
Aaska Marxuumka waxa ka qayb galay inta badan ee bulshada caasimadda Hargeysa, Madaxweyne Biixi, ku xigeenkiisa, Madaxweynihii hore Axmed-siilaanyo, madaxda dhaqanka ee Somaliland, marti ka timid gobalada dalka iyo kuwo kale oo ka kala yimid dalalka jaarka.
Xaaji Cabdikariim oo ay da’adiisu lagu qiyaasay 122 sannadood, wuxuu ka tirsanaa golaha guurtida, waxaanu ahaa gadhwadeenkii nabadaynta iyo dib u heshiisiinta dhex dhigay beelaha Somaliland.
Alle ha u naxariisto marxuum Xaaji Cabdikariim Xuseen Yuusuf, waxa ay geeridiisu Somaliland ku banaysay kaalin muhiim ah.
← Maxkamadda Hargeysa oo diiday inay bilowdo dhagaysiga dacwada xildhibaan Dhakool
Abwaan Weedhsame, oo maanso baroor diiq ah ka tiriyey geeridii marxum Xaaji Cabdikarim Xuseen Yusuf →